Mitandrema amin'ny famoahana ireo script Google Analytics marobe | Martech Zone
Miaraka amin'ny fampidirana fitaovana betsaka amin'ireo rafitra fitantanana atiny maro dia maro, hitanay fa maro kokoa amin'ireo mpanjifanay manana olana amin'ny script Google Analytics no ampidirina ao anaty pejy imbetsaka. Manimba ny anao izany Analytics, ka miteraka fitateram-bahoaka be loatra, pejy isaky ny fitsidihana ary tsy misy taha ambony.
Androany vao nanana mpanjifa izahay izay nanana plugins 2 nidina sy namboarina mba hanampy ny script Google Analytics amin'ny bilaogin'izy ireo. Ary na ny plugin dia samy nanamarina raha efa misy script fenoina! Ny valiny dia notaterina be loatra ny fitsidihana ary manodidina ny 3% ny tahan'ny fiakarana. Raha latsaky ny 5% ny tahan'ny fihenam-bonao, matokia fa manana olana amin'ny script maro ao amin'ny pejinao ianao.
Ankoatry ny Analytics, ahoana no ahafantaranao raha nahavita an'io ianao? Ny fomba iray dia ny mijery ny loharanon'ny pejinao ary mitady ga.js. Na dia te hanara-maso ny tranokala aza ianao kaonty Google Analytics marobe, script iray ihany no tokony hisy.
Fomba iray hafa ny fanokafana ireo fitaovanao mpanamboatra ao amin'ny tranokalanao ary jereo ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra aorian'ny famelombelona ny pejy anao. Hitanao ve ny script ga.js nangatahina mihoatra ny indray mandeha?
Google Analytics dia miasa amin'ny alàlan'ny fandefasana script izay manangona ny fampahalalana rehetra, manangona ny vaovao amin'ny cookies an'ny browser ary mandefa izany amin'ny mpizara Google amin'ny alàlan'ny fangatahana sary. Rehefa feno mihoatra ny indray mandeha ny script dia manindry cookies indraindray izy ary mandefa fangatahana sary marobe amin'ny mpizara. Izany no antony bounce rate ambany dia ambany… raha mitsidika pejy mihoatra ny iray amin'ny tranokala ianao, dia tsy hitsangana. Ka… raha toa ka mitifitra mihoatra ny indray mandeha ireo script rehefa mitsidika pejy iray ianao, dia midika izany fa efa nitsidika pejy maro ianao.
Zahao ny pejinao sy ny anao Analytics hahazoana antoka fa ny anao Analytics apetraka araka ny tokony ho izy eo amin'ny tranokalanao ny script, ary alao antoka fa tsy mampiditra ny script tsy mihoatra ny indray mandeha ianao. Raha manao izany ianao dia tsy marina ny angon-drakitrao.
3 Oktobra 2012 à 3:32
Misaotra, horaisiko an-tsoratra izany. Heveriko fa izany no antony tsy hisian'ny fifamoivoizana amin'ny tatitra analyse ny tranokalako e-commerce. ny script google dia tsy mitovy amin'ny kaody fanaraha-maso hita ao amin'ny tatitra momba ny analytics google. misaotra namana.
14 Novambra 2013 à 6:21
Salama Douglas, hevitra tsara. Nihena toy izany koa aho hatramin'ny nanombohako andrana sasany tao amin'ny Google Tag Manager herinandro vitsivitsy lasa izay: Pejy 4/ Fitsidihana 🙂 ary miverina amin'ny 0.47% amin'izao fotoana izao 😀
Aorian'ny lahatsoratro dia izao ny valiny:
1.Scripts: Misy 1 ga.js (ny code of Analytics sy Tag Manager ihany no napetako tao amin'ny tranokalako). Tsy hitako ao amin'ny script faharoa (Tag Manager) misy reference momba ny ga.js fa gtm.js ihany. Tsy manana kaody lehibe aho fa ireo 2 apetaka miaraka (famakafakana voalohany, avy eo TM), ka tsy mila mampiasa fampiharana akory aho, na izany aza dia nojereko tamin'ny firebug ihany koa.
2. Tao amin'ny Console Tag manager no namoronako hetsika iray ihany (fotoana famoronana mitovy, fotoana fanombohana br milatsaka). Ity hetsika ity dia miasa amin'ny maha-mpihaino ny rohy ho an'ny Rohy mivoaka ary mitovy amin'ilay torohevitr'i James Cutroni ao amin'ny bilaoginy. Saingy nanao fanovana kely aho: Ny iray dia ny Non-Interaction Hit napetraka ho Marina (tsy tokony ho voan'ny bounce rate izany?) fa avy eo dia nasiako Label=referrer fa tsy navelako ho banga, satria tiako ho fantatra eo ny clicks. avy aiza. (Na izany aza, nesoriko androany izy io satria tsy ilaina araka ny noheveriko azy)
3. Mbola manana rohy mivoaka vitsivitsy aho miaraka amin'ny onClick=”_gaq.push()” taloha efa voapetaka fa izy rehetra ireo dia napetraka amin'ny Click Non-interaction ho Marina.